Sunday April 19, 2020 - 12:26:40 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya Sacuudiga ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka Aala Sacuud ay goob fagaara ah ku toogteen Cimmaad Cabdul Qawi Al Mansuur oo kasoo jeeda wadanka Yemen islamarkaana bishii November 2019 weerar Toorrayn ah ku qaaday kooxo Fanaaniin ah oo udhashay wadanka Spain.
Cimmaad oo 33 sana jir ahaa ayaa qirtay in uu Toorreyn ku dhaawacay sedaxda qof oo udhashay wadanka Spain kuwaas oo xaflad qoobka cayaar ah ku sugnaa xilligii uu weerarku dhacayay, saraakiisha wasaaradda arrimaha gudaha Aala Sacuud waxay sheegeen in Cimmaad uu qirtay in uu xiriir lalahaa Hoggaanka Ururka Al Qaacidda ee wadanka Yemen.
Maxkamad daaquud ah ayaa walaalkan Shahiiday ku xukuntay daldalaad iyadoo uhiilinaysa gaalada uu dhaawacay, arrinta la yaabka leh ayaa ah in wasaaradda arrimaha gudaha Sacuudiga xadgudubkan ay sameysay ku tilmaamtay Xad!.
Saraakiisha Sirdoonka Sacuudiga waxay sheegeen in ciqaab adag lamarsiin doono qof walba uu dhibaata ugeysta dadka reergalbeedka ee fisqiga ka wada dhulka Xarameynka, sedaxda Fanaanaan ee uu weerarka Toorreynta ah ku dhaawacay ninkan muslimka ah ee ladilay waxay ushaqeynayeen waxa loogu yeero hay'adda Tamashlaynta oo ah hay'ad loo xilsaaray in ay dhaqan rogto dadka ku dhaqan dalka Sacuudiga loo yaqaan.
Nidaamka Max'med Bin Salmaan ayaa sanadadii dambe qaadayay tallaabooyin ka dhan ah Shareecada Islaamka oo uu ku raalli gelinayo dowladaha reergalbeedka oo ay ugu horreeyo Mareykanka.